Maxaa ku soo kordhay go’doominta Al-Shabaab ay ku soo rogtay degmada Luuq & Wararkii ugu dambeeyay +SAWIRRO | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ku soo kordhay go’doominta Al-Shabaab ay ku soo rogtay degmada Luuq...
Maxaa ku soo kordhay go’doominta Al-Shabaab ay ku soo rogtay degmada Luuq & Wararkii ugu dambeeyay +SAWIRRO
Luuq (Halqaran.com) – Tan iyo Jimcihii waxaa ka jirta xaalad go’doomin ah degmada Luuq ee Gobolka Gedo oo ay ku soo rogtay Al-Shabaab, iyadoo degmadaasi laga dareemay karkarka kuleelka ee ka dhashay xaaladaasi go’doominta ah.
Go’doominta ayaa waxay timid, ka dib markii Ururka Al-Shabaab uu u yeeray lix ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Degmada Luuq, balse uu Maamulka Degmada ka war helay, isla-markaana uu odayaasha ugu goodiyay inaanay ku soo laaban doonin Luuq, haddii ay ka jawaabaan dalabka uga yimid Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo tallaabadaasi ka carooday ayaa cunaqabateen deg deg ah ku soo rogay Degmada Luuq, iyagoona ganacsatada ku wargeliyay inaanay wax ganacsi ah keeni karin degmadaasi, ciddii keentaana ay tallaabo adag ka qaadi doonaan.
Aadan Faarax oo ka mid ah waxgaradka Degmada Luuq ayaa faah faahiyay sababta ay Shabaabka ugu yeereen Odayaasha Dhaqanka iyo waxa ay ka doonayaanba.
“Al Shabaab waxay muddooyinkanba waday Ugaasyo ay u samayneysay beelaha. Marka beesha odayaashaan ka soo jeedo ayay hadda u samayneysay Ugaas, sidaasi daraadeed ayaana odayaasha loogu yeeray.” Ayuu yiri Aadan Faarax.
Aadan Faarax oo la hadlay warbaahinta Halqaran.com ayaa yiri, “Ururka Al-Shabaab waxay Odayaasha Dhaqanka ee Beesha Xasan Gaalshireedle/Mareexaan ka dooneysay inay yimaadaan Deegaanka Golweyn oo 35 u jira Degmada Luuq, oo ah meesha Ugaaska cusub loogu samaynayo Beesha Gaalshireedle, hadafkooduna wuxuu yahay inay odayaasha taageeraan Ugaaska cusub, waa intaas inta ay Al Shabaab ka dooneysay.”
Sidoo kale, Aadan Faarax ayaa daboolka ka qaaday in uu socdo dadaalo ay garwadeenka ka yihiin ganacsatada Degmada Luuq, si degmadaasi laga saaro go’doominta ay ku hayso Al-Shabaab.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri “Axadii shalay waxaa is raacay guddi ka tirsan ganacsatada Luuq iyo Odayaashii Dhaqanka ee Al-Shabaab u yeertay, waxayna ku maqan yihiin Deegaanka Golweyn. Ganacsatada waxay rabaan inay Al-Shabaab ku qanciyaan in loo soo fasaxay odayaashii ay doonayeen, degmadana ay uga qaadaan amarka ay duldhigeen.”
Odayaasha dhaqanka Luuq
Wararkii ugu dambeeyay go'doominta Al Shabaab degmada Luuq